आँखामा किन लाग्छ कचरा ? | Nepali Health
आँखामा किन लाग्छ कचरा ?
२०७३ चैत १२ गते ८:०९ मा प्रकाशित
विहान उठ्ने वित्तिकै हामी मुख धुन्छौँ अनि फ्रेस हुन्छौँ । मुख धुने क्रममा सबैभन्दा बढी पानी आँखामा फाल्छौँ । यसरी आँखामा बढी पानी फाल्नु निन्द्राको ह्याङ फाल्न मात्रै होइन आँखा सफा होस भन्नका लागि हो ।